राजपा-समाजवादी एकतामा शीर्ष नेताकै व्यवस्थापन बाधक – खोज केन्द्र
» प्रदेश » राजनीति » समाचार » समाज अंक: 2582
राजपा-समाजवादी एकतामा शीर्ष नेताकै व्यवस्थापन बाधक
नबीन झा शुक्रबार, फाल्गुण २३, २०७६ मा प्रकाशित
राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतामा शीर्ष नेताकै व्यवस्थापन बाधक बनेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले प्रयास भइरहेको र चाँडै एकता हुने दाबी गरे पनि झन्डै डेढ वर्षदेखिको कसरत अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक भने दुवैतर्फका शीर्ष १० नेताको व्यवस्थापन उल्झनजस्तो देखिएको छ ।
एकताका लागि संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । फेरि एकतामा ढिलाइ किन ? राजपा र समाजवादीकै नेताहरू अनौपचारिक संवादमा भन्छन्, ‘एकीकरणका लागि दुवै पक्ष तयार छन् । र, मूल कुरा दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वको व्यस्थापनमा अड्किएको छ ।’ शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन नै एकतामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ ।
एकताका लागि भएका विभिन्न चरणका वार्तामा सहभागी राजपाका एक नेताका अनुसार हात्तीवन छलफलमा यादवले महन्थ ठाकुरलाई सर्वमान्य नेता बनाउन तयार भए पनि राजपा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेतालाई पदाधिकारी हैसियत मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । यादवले ठाकुरपछि अहिलेजस्तै बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि कार्यकारी अधिकार आफैँले पाउनुपर्नेे चाहना राखेका थिए । राजेन्द्र महतोलाई चौथो वरीयतामा राख्न तयार भए पनि अधिकारबारे मुख खोलेका थिइनन् । महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारीलाई अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठपछि राख्ने यादवको प्रस्ताव थियो ।
टुटफुटका लागि आलोचित मधेसकेन्द्रित दलका नेता पछिल्लो समय एकीकरणको कसरतमा लागेका छन् । तर, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच चलिरहेको एकीकरण संवादमा शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनले सकस परिरहेको छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनसँगै तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग १३ भदौ ०६४ मा जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकारबीच २२बुँदे सहमति भयो । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासलगायतले पार्टी परित्याग गरे । सोनल र शर्मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा छिरे भने गुप्तालगायतले मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) नामक छुट्टै पार्टी गठन गरे ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट जितेर चौथो ठूलो दल बनेको फोरम वीरगन्ज महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक फुट्यो । अमर यादवसहित केही प्रमुख नेताहरू बाहिरिए । त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयले फोरममा फुट आयो । विजय गच्छदार झन्डै आधा सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य लगेर नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । त्यतिवेला उनी फोरम संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता थिए ।
नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै फेरि फोरम फुट्यो । आधा सभासद र केन्द्रीय सदस्य लगेर जेपी गुप्ता फोरमबाट निस्किए । र, उपेन्द्र यादव सबैभन्दा सानो फोरम समूहका नेता रहे । त्यसपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यादवको फोरमले दुई सिट मात्रै जित्यो । त्यसपछि यादवले एकीकरण अभियान सुरु गरे । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गरी समाजवादी दल बनाए । एकता सभामा भट्टराई र यादवले राजपासँग एकीकरण गर्ने घोषणा गरे । अहिले त्यही घोषणालाई मूर्तरूप दिन लागिरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।